Kenya oo bilaabaysa baadhitaan rasmi ah - BBC News Somali
2 Oktoobar 2013
Image caption Dadweynaha Keny oo ducaysanyaa
Madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in la saarayo guddi gaar ah oo baaditaan oo xog iyo macluumaad buuxa ka soo ururiya sida wax u dhaceen iyo tallaabooyinka loo baahna in la qaado si looga hortago weerarrada noocan ah ee argagixisada. Waxanu ku dhawaaqay madaxweynuhu baaqani iyadoo lagu jiro duco weyn oo dhammaan madaxda caqiidooyinka kala geddisan ee dalka Kenya ay ku qabteen magaalada Nairobi, looguna duceynayey dadkii ku dhintay weerarkii dhawaa ee Westgate.
Rugtii Wesgate waxa iyaguna Isniintii soo booqday guddi ka socota baarlamaanka Kenya oo qaabilsan dhinaca nabagelyada iyo xidhiidhka debadda oo iyaguna xogbaadh ku jira ku sabsan sida dhibaatadan oo kale ay u dhici karto, iyo sababah keenya in aan laga sii gaashaaman.
Baadhitaannada noocan ahi waxa laga yaabaa inay qaataan muddo toddobaadyo amma bilo ah, waxase jira baaqyo badan oo ka imanaya iyaguna dhinac dadweynaha oo lagu dhaliilayo ciidamada nabadgelyadu inayna ka soo wada bixin hawlihii laga filayey ee ka hortagga falalka argagixiso ee noocan ah.
Weerarkani ugu danbeeyey ee Westgate waxa ku dhintay ilaa 67 qof, ilaa haddana waxa la laaya'ay oo la baadi goobaya 30 qof.